MALAKIA 3.1-15	F. 4 | Fitandremana Ankadifotsy
MALAKIA 3.1-15	F. 4
NY FAHASAMBARAN’NY FIVERENANA AMIN’NY TOMPO
Handefa olona ho iraka ny Tompo (1-5). Hialoha ny fahatongavan’ny Tompo ny iraka hanomana ny fon’ny olona, hitaona azy ireo hiala amin’ny ratsy fanaony. Hamerina ny fanekem-pihavanana, ka hanadio ny mpisorona sy hanarina ny fanompoana ho amin’ny fahamarinana no hhatongavan’ilay iraka. Mazava ihany koa anefa fa tena ho avy Ilay Mesia (1b, 5) hamaly, hanameloka ny mpanohitra sy ireo tsy nanaja Azy ny Tompo.
“Miverena Amiko, dia mba hiverina aminareo kosa aho” (6-9). Antsom-pitiavana no ataon’ Andriamanitra eto, mitaona ny Isiraely amin’ny fibebahana. Hiverina amin’ny fankatovana ny didin’Andriamanitra no hiantsoana azy ireo. Nalahelo Andriamanitra satria nandroba Azy ny olona tamin’ny tsy nanaovany ny fahafolon- karena izay tokony natolotra ny mpisorona mba hitohizan’ny fanompoam-pivavahana (Deoteronomia 14.24-27). Tsy nanaja sy nanome voninahitra ny Tompo ambonin’ny zavatra rehetra izy ireo sady tsy nankato ny Teniny. Ozona arak’izany no lovainy.
Misy endrika toy izany ve eo amin’ny fiainan’ny kristiana sy ny firenena amin’izao vaninandro hiainantsiak izao? Miantefa hatrany ny antso ho amin’ny fibebahana marina sy fiainana ny didim-pitiavan’Andriamanitra.
Mandray fitahiana mahatretrika ny mpanaja ny Tompo (10-12). Mahita ny fo tena tia sy manaja Azy ny Tompo ka manome valisoa ho an’ireo mpankato ny teny. Hotahiany ny ao an-trano (10b), ny any an-tsaha (11), ny fireneny manontolo ( 12). Hiova sata, hiova fiainana satria sambatra miaraka amin’ny Tompo.
Izay manatona an’i Jesoa marina sy mino Azy ka tonga mpankato ny Teny dia hambinina. Hiaina Ilay fiainana be dia be, tsara lavitra nampanantenain’i Jesoa izy ireo.
Vavaka : Misoatra Tompo fa tsy miova ny fitiavanao anay!